18 Koorsooyin Online Stanford oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin 2022
Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay ku saabsan 18 koorsooyin bilaash ah oo bilaash ah oo Stanford ah oo wata shahaadooyin iyo xiriirkooda rasmiga ah ee codsigooda. Koorsooyinkan waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah ee Jaamacadda Stanford, oo ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee Ivy League ee Mareykanka. In kasta oo xisaabinta koorsooyinkan ay gebi ahaanba bilaash yihiin, qaar iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin lacag ujro ah ardayda doonaya inay helaan shahaado rasmi ah markay ku guuleystaan ​​mid ka mid ah koorsooyinkan.
Adoo adeegsanaya teknoolojiyada casriga ah, Jaamacadda Stanford waxay awood u leedahay inay bixiso koorsooyin khadka tooska ah, bilaash kiiskan, kaqeybgalayaasha daneynaya inay ku biiraan oo ay bartaan xirfad ama ay helaan aqoon ku habboon.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee 'Stanford' ee khadka tooska ah waxaa ka mid ah koorsooyin kala duwan oo ku saabsan noocyo kala duwan oo aad ka dooran karto waxaadna ku baran doontaa iyaga maqaalkan.
Inta badan koorsooyinkan internetka ee Stanford waxaa lagu bixiyaa iyada oo loo marayo Stanford Online kaasoo ay si rasmi ah u maamusho Xarunta Horumarinta ee Stanford oo dhammaantood ka hooseeya dallad weyn oo ka tirsan Jaamacadda caanka ah ee Stanford, oo adduunka looga aqoonsan yahay waxbarashadeeda heer caalami iyo heer sare ee daraasaadka cilmi baarista iyo culuunta kale.
Bixinta waxbarashadeeda heer caalami ah kuma joogsan inay siiso oo kaliya ardayda awooda inay awoodaan markay yimaadaan iskuulka, taa badalkeed, jaamacadu waxay isticmaashaa tabo casri ah oo casri ah si loogu faafiyo waxbarashadan heer caalami ah qofkasta oo leh PC / laptop iyo khadka internetka.
Iyada oo la adeegsanayo qalabka saxda ah, qofkastaaba wuxuu wax ka baran karaa waxa ay ka doonayaan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Stanford' iyagoo aan bixin dime. Koorsooyinka waxaa si isku mid ah u bixiya macallimiinta sare ee jaamacadda iyo macallimiinta weli hubinaya inay u soo bandhigaan waxbarasho tayo leh dhammaan iyo dhammaanba.
In kasta oo inta badan koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee 'Stanford' si toos ah loogu bixiyo khadka tooska ah ee 'Stanford Online platform', kuwa kale waxaa lagu bixiyaa noocyo kala duwan baraha internetka iskaashi la leh Jaamacadda Stanford.
1 Miyuu Stanford bixiyaa koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah?
2 Koorsooyinka internetka ee Stanford ma u qalmaan?
2.1 Faa'iidooyinka qaadashada koorsooyinka khadka tooska ah ee Jaamacadda Standford
3 18 Koorsooyin Bilaash ah oo Stanford ah oo wata Shahaadooyin
3.1 Tababarka Dawada Musiibada
3.2 Barashada tirakoobka
3.3 Sayniska kombiyuutarka
3.4 Nafaqada Ilmaha iyo karinta
3.5 Aasaasiga Istaraatijiyadda Barnaamijka iyo Qiimeynta
3.6 Qeexida Quartetka Xarigga: Haydn
3.7 Naqshadaynta Xirfaddaada
3.8 Iskaashi lala yeesho Dadweynaha iyo Bukaannada ku jira Cilmi baarista Caafimaadka
3.9 Algorithms: Naqshadeynta iyo Falanqaynta
3.10 Xirfadaha Teknolojiyada Warbaahinta
3.11 Hordhaca Haptics
3.12 Falanqaynta Ururka
3.13 Caafimaadka Haweenka Caalamiga ah iyo Xuquuqda Aadanaha
3.14 Shabakadaha Bulshada iyo Dhaqaalaha: Moodooyinka iyo Falanqaynta
3.15 Barashada Mashiinka
3.16 Qorista Cilmiga
3.17 Aragtida Game
3.18 Hordhaca Stanford ee Cuntada iyo Caafimaadka
Miyuu Stanford bixiyaa koorsooyin khadka tooska ah oo bilaash ah?
Stanford waxay bixisaa koorsooyin badan oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan maadooyin kala duwan oo lagu bixiyo Stanford Online iyo barnaamijyada kale ee barashada internetka. Koorsooyinkani waa khadka tooska ah waana bilaash, tani waa fursad weyn oo aad ku baran karto mid ama in ka badan xirfad aad dooratay oo ah jaamacad sare adigoon bixin dime.
Koorsooyinka internetka ee Stanford ma u qalmaan?
Jaamacadda Stanford waa machad tacliin sare oo adduunka oo dhan loo aqoonsan yahay mid qudha, koorsooyinku waxay leeyihiin sharaf tacliimeed sare oo loo shaqeeye kastaa wuu ogyahay tan sidoo kale taas oo ka dhigaysa koorsooyinka internetka ee Stanford gabi ahaanba u qalma.
Sidoo kale waa laguu aqoonsan karaa inaad kaqalinjabisay Stanford ama waxbarte maadama resume-kaaga / CV ay kujiraan shahaado lifaaqan oo muujinaysa inaad waxbartay oo aad dhammaysatay koorso khadka tooska ah ah oo aad u martay Jaamacadda Stanford.
Faa'iidooyinka qaadashada koorsooyinka khadka tooska ah ee Jaamacadda Standford
Koorsooyinku waa khadka tooska ah, sidaas awgeed lacag kama bixinaysid nooc kasta oo gaadiid ah sida arday caadi ah. Waxaad fadhiisan doontaa raaxada gurigaaga, xafiiskaaga, gaarigaaga si aad wax u barato.
Waxaa jira koorsooyin kala duwan oo aad kala dooran karto, waxaad sidoo kale go'aansan kartaa inaad wax ka barato wax ka baxsan edbintaada si aad ugu ururiso aqoonta qaybaha kale ee waxbarashada.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Stanford' waxaa wax u barta barayaasha macallimiinta sare ee Stanford iyo macallimiinta, ma bixin doontid dime si aad ugu raaxaysato waxbarashadan tayada leh sidoo kale waxaad sidoo kale ku amri doontaan sumcadda Stanford.
Maaddaama koorsooyinku ay internetka yihiin sidaas awgeedna waa la rogrogmi karaa taas oo macnaheedu yahay inaad dooran karto qaab waxbarasho oo ku habboon jadwalkaaga.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Stanford' ayaa kaa caawin doona inaad horumariso xirfaddaada waxaadna yeelan kartaa xirfad cusub ama aad ku cadaydo xirfadaha jira oo si otomaatig ah kaaga hormariya tartanka xoogsatada oo leh isla xirfad shaqo.
Guud ahaan, barashada khadka tooska ah waa mid aad u habboon.
Xagga sare waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Stanford' iyo shahaado, waxay kaa dhigeysaa inaad si rasmi ah ugu qalmi karto shaqo, waxaad gabi ahaanba shaqo ku heli kartaa shahaado khadka tooska ah ah oo xitaa waad ku guuleysan kartaa tartan tan iyo markii shahaadadaadu ay ka imaaneyso Jaamacadda Stanford .
Waxay ku dhowdahay waqtigii aan ku quustay mawduuca ninka, halkaas oo aad ka ogaan karto koorsooyinkan bilaashka ah ee 'Stanford' oo leh shahaadooyin oo aad bilaabi karto daraasaddaada.
Koorsooyinkani waa bilaash waxayna la yimaadeen shahaado dhammaystir ah oo u baahan wax yar ama lacag la'aan ah si loo helo sidoo kale, dhammaan koorsooyinkan waxay ku qoran yihiin luqadda Ingiriisiga sidaa darteed kaqeybgalayaasha xiiseynaya waa inay lahaadaan aqoon Ingiriisiga adag ee kaqeybgalka.
Hadda, iyada oo aan wax kale oo dheeri ah, waxaan qori doonaa koorsooyinkan oo waxaan ku bixin doonaa faahfaahintooda si waafaqsan
Tababarka Dawada Musiibada
Nafaqada Ilmaha iyo karinta
Aasaasiga Istaraatijiyadda Barnaamijka iyo Qiimeynta
Qeexida Quartetka Xarigga: Haydn
Iskaashi lala yeesho Dadweynaha iyo Bukaannada ku jira Cilmi baarista Caafimaadka
Algorithms: Naqshadeynta iyo Falanqaynta
Xirfadaha Teknolojiyada Warbaahinta
Caafimaadka Haweenka Caalamiga ah iyo Xuquuqda Aadanaha
Shabakadaha Bulshada iyo Dhaqaalaha: Moodooyinka iyo Falanqaynta
Hordhaca Stanford ee Cuntada iyo Caafimaadka
Waxaa lagu soosaaray Barnaamijka Daawada Degdega ah ee Stanford ee Waxqabadka Degdegga ah, koorsadan khadka tooska ah ee Stanford waxaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo oo loo diyaariyo bartayaasha wixii ah arrimo deg-deg ah ee la xiriira caafimaadka aadanaha iyadoo la siinayo aqoonta dawada masiibada.
Koorsada Tababarka Dawada Musiibada waxay kakoobantahay manhajyo kaladuwan oo ay dhigayaan macalimiin kaladuwan oo caafimaad oo Stanford ah, iyo inaad aqoon caafimaad uleedahay iyo inkale waxaa lagusoo dhaweynayaa inaad koorsadan qaadatid maadama lagugu baran doono dhamaan wixii aad ubaahantahay inaad kasoo ogaato meesha ugu hooseysa.
Mudada Koorsada: 8 Toddobaad
Dadaal: 1-2 saacadood usbuucii
Ku noqo shahaado Barashada Tirakoobka adoo kaqeyb galaya koorsadan khadka tooska ah ee Stanford oo aad kaheli doonto aqoonta aasaasiga ee tirakoobka iyo barashada qaar kamid ah aaladaha ugu muhiimsan ee loo adeegsado qaabeynta tirakoobka iyo sayniska xogta.
Waxa aad baran doonto waxaa ka mid ah dib u soo noqoshada toosan, qaababka dib u qaabeynta, xulashada qaabka toosan iyo waxyaabo kaloo badan. Aqoontani waa lagu dabaqi karaa ganacsi kasta iyo xitaa qaybta caafimaadka sidaa darteed waxaad ku jiri kartaa qayb kasta oo daraasad ah wali waad aadi kartaa koorsadan.
Mudada Koorsada: 9 Toddobaad
Dadaal: 3-5 saacadood usbuucii
Dhamaanteen waan isku raaci karnaa in tani ay tahay xirfada loogu raadinta badan yahay aduunka maanta kuwa kale, waxaad ku baran kartaa wax walba oo ku saabsan kombiyuutarada, codeynta aasaasiga ah iyo waxyaabo badan oo dheeraad ah koorsadan khadka tooska ah ee Stanford. Koorsadani waxaa wax ka baraya meel ka soo bilaw macallimiintii ICT ee Stanford iyo macallimiintii ugu sarreeyay.
Kaqeybgalka koorsadan iyo helitaanka shahaadad ayaa kuu fureysa fursado shaqo adiga iyo sidoo kale fursad aad kubarato waxbadan oo ku saabsan farsamada kombiyuutarka iyo barnaamijyada sireed.
Mudada Koorsada: 6 Toddobaad
Dadaal: 4-6 saacadood usbuucii
Waalid ahaan, ilmo yar ama qof uun doonaya inuu soo uruuriyo aqoon dheeri ah, koorsadan khadka tooska ah ee Stanford waxay ku siin doontaa aqoon ku saabsan sida looga dhaqmo cunnooyinka cunnooyinka fahankooda iyo sida loo siiyo cuntada saxda ah.
Ka noqoshada shahaadada nafaqada caruurta iyo cunto karinta waxay ku kasban kartaa shaqo macalinimo, waxay ku siinaysaa aqoon habka saxda ah iyo waxa saxda ah ee lagu quudiyo caruurtaada iyo dadka kale sidoo kale.
Mudada Koorsada: 5 Toddobaad
Barnaamij kasta oo la abaabulayo waxaa laga yaabaa inuu yahay mid dhiirrigelin ah, lacag ururin, maalmaha dhalashada, shirar ama barnaamij kasta oo kale oo bulsheed oo la xiriira caafimaadka, deegaanka, waxbarashada iyo kuwa kaleba waxay had iyo jeer u baahan yihiin qaab istiraatiijiyad ah si barnaamijka looga dhigo mid guuleysta.
Waxaad ku kasban kartaa xirfaddan adoo kaqeyb galaya koorsadan khadka tooska ah ee Stanford ee bilaashka ah, baro inaad sameysato xeelado kuu sheegaya shaqadaada hogaamiye aan faa'iido doon ahayn ama siyaasad dejiye kaa caawin doona inaad xaqiijiso inaad gaarto natiijo wax ku ool ah.
Mudada Koorsada: 4 Toddobaad
Dadaal: 5-10 saacadood usbuucii
Quartet-ka xariiqa heerka aasaasiga ah waa erey muusiko ah oo loola jeedo dhexdhexaadka afar qalab xarig: labo violin, viola iyo violoncello, qalabka farshaxanka-na waa la aqoonsan yahay aaladda.
Koorsadani waxay bixinaysaa aragti taariikhi ah oo ku saabsan qalabkan la xiriira haybad Haydn, hanashada taariikh-sameynta iyo sidoo kale waxaad wax ka baran doontaa qaar ka mid ah qoraalladii quartet-ka hore ee fanaaniinta kale sidoo kale.
Mudada Koorsada: 10 Toddobaad
Dadaal: 3-6 saacadood usbuucii
Naqshadaynta xirfadahaaga Koorsooyinka bilaashka ah ee Stanford waxaa loogu talagalay inay ka caawiso bartayaasha inay si wax ku ool ah u galaan goob cusub oo xiise leh haddii aad sahamineyso waxa aad rabto inaad sameyso ama aad hore u degtay mid, waxaad ka heli doontaa aqoon ku saabsan sida loo horumariyo isku xirnaanta xirfadeed ee dhabta ah iyo barashada cusub siyaabaha loo fahmo loona wajaho isku xirnaanta.
Dadaal: 2-5 saacadood usbuucii
Koorsadan khadka tooska ah ee 'Stanford' ee khadka tooska ah waxaa loogu talagalay bukaan socod eegtada, cilmi baarayaasha, bukaanada iyo xubnaha guud ee bulshada si looga caawiyo lashaqeynta bukaan socodka cilmi baarista caafimaadka, loo abuuro xiriiro kalsooni leh bukaanada iyo baarayaasha.
Intaas waxaa sii dheer, kaqeybgalayaasha xiisaha leh waxay baran doonaan adeegsiga daryeelka caafimaadka, faa iidooyinka, caqabadaha iyo jidgooyooyinka wadajirka daryeelka caafimaadka.
Kor u qaad xirfadahaaga kombiyuutarka iyo barnaamijyada adigoo kaqeyb qaadanaya koorsadan khadka tooska ah ee Stanford, algorithms waa wadnaha sayniska kombiyuutarka dadka leh xirfadahaas oo kale waxaa raadiya shirkadaha tiknoolajiyada xitaa qaybaha kale waxay ubaahan yihiin dadka leh xirfadaas oo kale.
Si aad uga qaybqaadato koorsadan waxaa lagula talinayaa in bartayaashu ay leeyihiin aqoonta aasaasiga ah ee barnaamijyada maadaama algorithms ay wax ka qabato barnaamijyada sidoo kale.
Dadaal: 2-4 saacadood usbuucii
Waxaan la kulannaa teknoolojiyadaha kala duwan ee warbaahinta maalin kasta, laga bilaabo idaacadaha iyo telefishanka ilaa gitaarka elektarooniga ah, ciyaaraha fiidiyowga iyo nidaamyo cod oo kala duwan oo loo adeegsado soo saarista codadka, sida muusikada, iyo gudbinta macluumaad kala duwan.
Markaad ku soo biirto koorsadan, waxaad sahamin doontaa sida shirkadaha naqshadeeya qalabkan ay alaabtan uga keenaan fikrad ay suuqa ku soo galayaan. Waxaad kaheli doontaa aragti nolol maalmeedka shirkadaha sida Adobe, Universal Audio, Izotope iyo inbadan waxaadna ogaan doontaa fursadahaaga xirfadeed ee warshadaha.
Dadaal: 6 saacadood usbuucii
Haptics waa aalado farsamo oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay dareemaan jawi astaamo ama durugsan, tani waxay la xiriirtaa farsamooyinka aaladaha oo waxay u muuqan kartaa wax adag laakiin ku biirista koorsada ayaa si tartiib tartiib ah kuugu sharxi doonta wax walba oo ay ka mid yihiin xirfadaha wax ku oolka ah.
Koorsada waxaa bixiya Allison Okamura, Borofisar caan ku ah jaamacada Stanford ee injineernimada farsamada kaas oo qalabayn doona ardayda leh khibrad gacmeed oo ku saabsan uruurinta nidaamyada makaanikada, sameynta wareegyada, barnaamijyada, bioengineering iyo sida loo tijaabiyo abuurka haptiga ah.
Dadaal: 1-10 saacadood usbuucii
Ururrada waxaa laga helaa meel kasta oo adduunka ka mid ah qof walbana waa qayb ka mid ah sidoo kale, xitaa haddii aadan mid ka ahayn hadda waa hubaal inay dhici doonto mararka qaarkood. Koorsadan isbarashada ah ee isbarashada ah, waxaad ku baran doontaa aragtiyo badan oo ku saabsan habdhaqanka abaabulka waxaadna ku dabaqi doontaa kiisaska dhabta ah ee isbeddelka ururka.
Ku biirista koorsadan internetka ee bilaashka ah ee '' Stanford '', waxaad ka heli doontaa xirfado iyo aqoon maamul, aragti urur, falanqeyn iyo dhaqan. Xirfadaha noocan ah ayaa looga baahan yahay ku dhowaad dhammaan qaybaha adduunka oo helitaanka shahaadaduna waxay kaa dhigeysaa mid u qalma jago kasta oo shaqo.
Mudada Koorsada: 11 Toddobaad
Koorsadan bilaashka ah ee khadka tooska ah ee 'Stanford' waxay saameyn ku yeelaneysaa aqoonta caafimaadka haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka laga bilaabo dhalaanka illaa da'da weyn, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan waxqabadyada wanaagsan ee la xiriira arrimahaas.
Xirfadaada cusub ee la helay, waxaad qeyb ka noqon kartaa u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee u dagaalamaya xuquuqda gabadha gabadha iyo ka caawinta badbaadinta haweenka xaaladaha xun. Waxaad sidoo kale la wadaagi kartaa xirfadaada qeybta caafimaadka sidoo kale.
Dadaal: 2-3 saacadood usbuucii
Ku soo biir Stanford Online koorsadan iskeed u socota oo baro sida loo qaabeeyo shabakadaha bulshada iyo dhaqaalaha iyo saameynta ay ku leeyihiin hab dhaqanka aadanaha. Waxaad kaheli doontaa xirfado shabakada bulshada, aragtida ciyaarta, falanqaynta shabakada iyo aragtida taas oo lagu dabaqi karo ururo kaladuwan gaar ahaan waaxda HR.
Barashada Mashiinka waa qayb ka mid ah Sayniska Xogta ee ka shaqeeya helitaanka kombuyuutarrada inay shaqeeyaan iyadoo aan si toos ah loo barnaamijayn. Gawaarida iswada, raadinta webka, aqoonsiga hadalka iyo waxyaabo kale oo badan ayaa qeyb ka ah hal abuurka cajiibka ah ee barashada mashiinka.
Ku soo biir koorsadan si aad uga kasbato aqoon teori iyo farsamo ku saabsan farsamooyinka barashada mashiinka ugu wax ku oolka badan iyo sida loo hirgeliyo si aad ugu shaqeyso naftaada iyo dadka kaleba, si lacag laguugu siiyo adeegyadaada.
Mabaadi'da qoraalka wanaagsan, tabaha loo qoro si dhakhso leh oo walwal yar, dib u eegista asxaabta, qorista deeqda iyo qorista dhagaystayaasha guud waxaa la barayaa saynisyahannada iyada oo loo marayo koorsadan khadka tooska ah ee Stanford si looga dhigo qorayaal wanaagsan iyagoo adeegsanaya tusaalooyin iyo jimicsi wax ku ool ah.
Aragtida cayaartu waa tusaalaynta xisaabeed ee isdhexgalka istiraatiijiyadeed ee wakiilada caqliga iyo caqliga, oo ay kujirto tusaalaha isku dhaca umadaha, ololeyaasha siyaasadeed, tartanka shirkadaha iyo habdhaqanka ganacsiga suuqa.
Markaad ku soo biirto koorsadan khadka tooska ah ee 'Stanford' ee khadka tooska ah, waxaad ka heli doontaa xirfado iyo aqoon ku saabsan aragtida ciyaarta, dib u soo kicinta gadaal, ciyaarta Bayesian iyo waxaad baran doontaa farsamooyin kala duwan oo mushkiladda lagu xalliyo.
Waxaad tahay waxaad cunayso. Cunista nooca saxda ah waqtiga saxda ah waxay la timid faa iidooyin faro badan oo caafimaad, dad badan ayaa la ildaran buurnida, kaadi macaanka iyo cudurada kale ee dabadheeraada ee laga hortagi karo sababtoo ah waxay cunaan nooc khaldan oo cunto ah.
Ku soo biir koorsadan khadka tooska ah ee 'Stanford' ee khadka tooska ah isla markaana ka kororso aqoonta nafaqada, sayniska cuntada iyo nabadgelyada iyo macluumaadka caafimaadka oo kaa caawinaya inaad ogaato noocyada kala duwan ee cuntada ee jidhkaagu u baahan yahay oo aad aqoontaada dibadda u bixin karto sidoo kalena aad ka kasban karto inaad ahaato cunto iyo nafaqeeye caafimaad.
Dadaal: 1-3 saacadood usbuucii
Tani waxay soo afjareysaa koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 'Stanford' ee liistadayada halkaasoo aadan bixin doonin hal dime si aad wax ugu barato inta badan koorsooyinkan sida aad jeceshahay iyo kaliya lacag magac u yaal ah si aad u hesho qaar ka mid ah shahaadooyinka.
Koorsooyinkani waxay ka socdaan Jaamacadda Stanford waxayna la yimaadeen shahaado dhammaystiran oo dhammaystir ah oo ay aqoonsan tahay HR kasta oo adduunka ah, shahaadadaada internetka waxaad ku heli kartaa shaqo mushahar wanaagsan leh oo ku saabsan qaybaha kala duwan ama haddii aad hore u shaqeynaysay oo aad heshay shahaadada aad fursad u leedahay in lagu dallacsiiyo ama mushahar lagu kordhiyo.
Waa muhiim in kaqeybgalayaashu ay xoogga saaraan waxbarashadooda maadaama ay khadka toosan tahay waxyaabo badan oo carqaladeeya ayaa qasab ah inay ku yimaadaan wadadaada laakiin go'aanka waxaad ku dhameystiri kartaa koorsada aad rabto oo aad xirfad ku yeelan kartaa.
Talooyin ku saabsan helitaanka gelitaanka Stanford online Masters
35 Koorsooyin Bilaash ah oo Koorsooyin ah oo leh Iskuxirayaashooda Codsiga
Koorsada internetka ee bilaashka ah ee 'Stanford'
Previous Post:Top 3 Jaamacadaha ugu Qaalisan Koonfur Afrika ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:6 Kulliyadaha ugufiican ee loogu talagalay Shahaadooyinka Ingiriisiga ee Hoose ee leh Kharashka Iskucelceliska Lacagta
Pingback: Sida Loo Helo Ogolaanshaha Mastersford Online Masters.